Wararka iyo Sheekooyinka Rubber & Plastics by Alietc.com - Alietc.com
Wax Walboo Aad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Xuubka Hooska
Waa maxay tuubbooyinka caagga ahi? Tuubada cinjirka waa tuunbo adkeysi leh oo loo isticmaalo dhaqaajinta iyo bixinta dareeraha ama gaaska. Tuubbooyinka caagduhu waxay ku yimaadaan cabbirro kala duwan iyo waxyaabo ay ka kooban yihiin. Tuubbada ugu fiican ee shaqo la siiyay waxay ku xirnaan doontaa waxa tuubadu ka kooban tahay, iyo xooggeeda iyo cabirkeeda. Tuubbooyinka caagduhu waxay u baahan yihiin isku-xidhka ama waxyaalo kale […]Read More
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan Hosbe-ka Rubber
Xaashida Balaastik_ Tayada, Adeegsiga iyo Noocyada
Xaashida balaastikada ah: go'yaasha balaastiggu waa nooc ka mid ah walxaha balaastigga ah ee adag. 010 ″ (. 25mm) oo badiyaa shidma xudunta laakiin badanaa loo jaro go'yaal. Wax kasta oo ka yar waxaa loo tixgeliyaa filim caag ah. Go'yaal balaastig ah ayaa laga sameysan karaa noocyo kala duwan oo balaastiig ah, mid walbana wuxuu leeyahay astaamo jireed oo kala duwan. Samaynta warqadda balaastigga ah: Xaashida balaastiggu waxay leedahay […]Read More
Tubooyinka Balaastikada: Maadooyinka, Faa’iidooyinka & Suuqa
Tubooyinka Balaastikada: Tuubooyinka balaastigga ah waxaa laga sameeyaa isku-darka isku-darka loo adeegsado socodka dareeraha ama nidaamyada dabiiciga ah ama sida dahaarka ama sheat-ka loogu talagalay foomamka korantada ama kululaynta. Tuubbada balaastigga ah waa mid khafiif ah oo la jaanqaadi kara, guud ahaan waxaa loo isticmaalaa sidii khadadka socodka ee dareerayaasha iyo gaasaska pneumatic, hydraulic, habka, caafimaadka, iyo ujeedooyin kale oo badan. Tuubbada waxay noqon kartaa […]Read More
Bixiyaasha Adeegga Bajaajku waxay u baahnaayeen in lagu daro qayb nadiif ah oo ka timid
Ka dib markii aan dib u eegnay xaqiiqooyinka, way cadahay in alaab-qeybiyeyaasha adeegga ka shaqeynaya cinjirku ay tahay in lagu daro meel nadiif ah oo ka mid ah kaydinta. Halkii hal shirkad maamuli laheyd silsiladda wax soo saarka, waxaa aad uga fiicnaan laheyd in dhowr shirkado oo wada shaqeynaya ay ka wada shaqeeyaan si ay howlahooda u noqdaan kuwo waxtar leh. Marka silsiladda alaabada la nadiifiyo, waxaa […]Read More
Isbarbar-dhigga Shirkadaha Alaabada Caaga ah Qiimaha Qiimaha Yar
Si loo hubiyo tayada alaabada caagga ah ee aad iibsato, waa lagama maarmaan in la isbarbardhigo dhammaan alaab-qeybiyeyaasha. Intaas waxaa sii dheer, tani waxay sidoo kale kaa caawin doontaa inaad doorato midka alaab-caaga ah ee alaab-qeybiyaha ugu habboon ganacsigaaga. Waxa jira qaar ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha laga yaabo inay kuu fidiyaan adeeg heer sare ah laakiin iyagu waa […]Read More
Soosaarayaasha waraaqaha caaga ah
Macaamiil badan ayaa ka naxay markay ogaadeen in baco ay sameyso shirkad aan laheyn warshad gaar ah oo ka sameysan baco. Waxaa jira dhowr shirkadood oo wax soo saar siiya dhowr macmiil, sidaa darteed waa inay awood u yeeshaan inay soo saaraan baco ku filan kaligood, si ay ula kulmaan […]Read More